Njengoba kulula ukulandela ingane
njengenjwayelo, ingane kungenxa ngesikhathi esifanayo ngenjabulo enkulu nezinhliziyo okungenani inqwaba enkulu ukukhathazeka ukuthi umzuzwana elahliwe phezu kwamakhanda abazali abasha. Kodwa impucuko womuntu ukufundisa abantu hhayi kuphela ukuthumela inyanga, kodwa futhi indlela engcono kakhulu ukuba babanakekele kusukela ekuzalweni. Namuhla, emakethe emelelwa imikhiqizo eminingi for abantwana babo bonke ubudala, lokho kakhulu, futhi uma ucabangela ukuthi cishe zonke imikhiqizo emisha ivela phesheya, ke lokhu ukumangala sengezwe ngezinye izikhathi ngokungaqondi, futhi kungakhathaliseki ukuthi yonke ukwehluka ethulwa ngempela kunjalo kubalulekile imvuthu? Lutho neze. Kodwa kunezinto ukuthi nakanjani kudingeka abazali ngokwabo.
Le ndoda kancane kuphoqa kakhulu ukunakwa, okwenza umama osemusha ukhathazekile ngaye futhi njalo eduze ukuthi esimweni salokho ngokushesha basisize umntwana, okuyinto ayidingayo. Kodwa lokhu ophoqelelwe ngokungaphezi esitokisini kancane kancane uphendulela obhekwe ukucindezeleka kwabakhulelwe, njengoba has cishe akukho ithuba ukukhokha wena okungenani isikhathi esincane futhi baphoqwa ukuba baye bacabange kuphela ngezithombe ingane. Kuyinto ukuvimbela Esimeni esinjalo, futhi yasungulwa (noma kunalokho ingashintshwa) idivayisi ewusizo kakhulu - baby qapha.
Eqinisweni, lena zomsakazo ezivamile, ehlanganisa izilinganiso ezingamakhulu amabili - umzali nomntwana. Avame ehlotshisiwe elimibalabala kakhulu, okubonisa ngokucacile ukuthi idivayisi ngamunye: umama nengane izithombe ubavumele lula ukuhlukanisa kusuka komunye nomunye.
Isimiso ezisebenza we baby qapha silula. Ingane iyunithi ibekwe eduze indlwana imvuthu kanye bakwazi wasithatha yonke imisindo ukuthi uyazizwa egumbini. Umzali iyunithi kweso edlulisela isignali, ngakho ungakwazi kweso ukuzwa ukuthi ingane wabe esephaphama ukuthi lenzani nganoma yisiphi isikhathi.
Ukusebenza amadivaysi noma by amabhethri noma ibhethri yangaphakathi. Esimweni sokuqala kunconywa ukuthenga amabhethri ekhethekile ezokwenza isikhathi eside, kodwa ngabo kuyodingeka bakhokhe imali kancane ephakeme.
Lapho ekhetha qapha ingane kubaluleke kabi, hhayi splurge umkhiqizo izinga ukuqinisekisa ukuxhumana okuhle emakamelweni (izindonga kakhulu ukuvikela isignali), kanye nokuvikela ingane yakho kusuka zokuchayekela emagagasini omsakazo. Believe nise ukuthi zingase ziphathe ubuchopho, lodwa, akudingekile, Nokho, kungcono ukuba banamathele imiyalo ku yeziqondiso, ukugwema kwenkululeko. Ngaphezu kwalokho, amadivaysi ezishibhile empeleni yingozi, ngoba ingozi kulokhu ndaba ayiyona neze into zasebukhosini. Kodwa ezimweni eziningi, kumayelana kuphela uhlobo isignali ngocansi. Uma kuwukuthi i-analog, iyunithi yakho khona-ke kwangathi ngephutha ukubamba namanye amadivayisi ukusakaza imvamisa efanayo. Ngakho-ke kungcono ukukhetha uhlobo isignali digital ukuthi luyazishintshela uma emoyeni iqala ukuphazamiseka.
Ayindlala kusukela ekuzalweni kuzodinga ukunakekela okukhethekile, okuyinto nakanjani kuholela ekutheni izindleko fixed. Yiqiniso, ungenza ngaphandle, kodwa bambalwa ababeka ngiziduduze ngenhla izithakazelo ingane. Ngaphezu kwalokho, abazali futhi musa ukuphuca ngokwakho injabulo lapho uthenga imikhiqizo yezingane kuphela, kungakhathaliseki stroller, indlwana-transformer noma yini enye.
Baby maduze kuyoba sobala labo izithombe akufundayo ukuhlukanisa phakathi, futhi nakakhulu-ke wonke efanayo, abanye zime ku isinciphisi yakhe noma namanabukeni, isikhohliso zokukhiqiza yena encela noma iyiphi izithelo okulungiselelwe ekuseni yakhe smoothie. Inhloko lapha bonke abadala, ngokuphazima kweso yokuvumelana isimo sakhe esisha abazali abasha bajabule.
Single - version jikelele
Yini sasivame usilika, ngaphandle isembatho izinto ingaphakathi
"Medazepam": ukubuyekezwa odokotela, imiyalelo, intengo
Wasemuva eCameroon Benoit Angbva
Astilbe, ukutshalwa kanye nokugcinwa
Embozwe legends Cyprus: Izindlu zangasese ka-Aphrodite - endaweni egcwele charm
Ama-talisman wezimpawu ze-Zodiac: uhlobo luni lwamatshe alungele u-Aquarius?
Bacindezele 130 kuya ku-80 - evamile noma cha? 130 80 Pressure ngesikhathi sokukhulelwa
Ukulungiselela nokwenza adzhika
Nokubeletha Izingubo - imithetho Ukukhetha.